२०७४ माघ २७ शनिबार ०९:२९:००
यो सुन्दर बजारको कथा हो, जसको सौन्दर्यसँगको सम्बन्ध ठीक उल्टो थियो । केही-केही त्यसरी नै, जसरी जलस्रोतको सबैभन्दा धनी देश नेपालको सम्बन्ध यहाँको लोडसेडिङ र खानेपानीको हाहाकारसँग छ ।
सुरुमा त्यो डोम जातिको बस्ती थियो । जहाँ तिनीहरुले सुङ्गुर पाल्ने, हाटबजार सफा गर्ने, बाँसका भकारी, ढाकी, नाङ्लो बनाउने काम गर्थे । तिनका बस्तीभरि सुङ्गुरका र बस्तीबाहिर मानिसका बिष्टा परैबाट गन्हाउँथे । जब महेन्द्र राजमार्गले त्यस ठाउँलाई आफ्नो बाटोमा पाऱ्यो, वरपरका गाउँ पञ्चायतका ठूलाबडा मानिसहरुका आँखा त्यहाँ पर्न थाले । तिनीहरु मिलेर सल्लाहले नै डोमहरुलाई त्यहाँबाट सारे । आफ्ना मानिसहरुलाई ल्याएर बस्ती बसाले । तिनीहरुले त्यहाँ इनार खने, मन्दिर बनाए, स्कुल खोले । शनिबार र मङ्गलबार हाट लगाउन जिल्लाभरिका गाउँहरुमा डङ्कासमेत बजाए । दुई दिन र चार रातको छलफलपछि बल्ल नाम जुराए, सुन्दर बजार । यद्यपि आजका मितिसम्म पनि डोमका सुङ्गुरहरुले सुन्दर बजारमा आएर बिष्ट्याउन भने छाडेका छैनन् ।
अचम्म किसिमले शान्त थिए त्यहाँका मानिसहरु । त्यतिकै चिसा पनि थिए । देशको कुनै पनि राजनीतिक उथलपुथलहरुले कहिल्यै पनि त्यस ठाउँलाई छोएन । त्यहाँको सर्वमान्य नेता थियो बिसनाथ बाबु । देशमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तन हुन्थे, ती सबैका प्रभाव अन्ततः बिसनाथ बाबुकोमा गएर टुङ्गिन्थे । पञ्चायतकालभरि ऊ खुङ्खार पञ्च थियो । २०४६ सालको सफल जनआन्दोलनपछि ऊ काङ्ग्रेस भयो । राजनीतिक पार्टीको प्रभावअनुसार आफू परिवर्तन भए पनि सुन्दर बजारबाट उसको प्रभाव भने कहिल्यै हटेन ।
मानिसहरु भन्थे, उसका आँखा र दिमाग दुवै सैतानको छ । हुन पनि उसका आँखा पूरै सुन्दर बजारभरिमा बेग्लै थिए । नीला तर गहिरा । मानिसहरु ठाडो आँखाले उसलाई हेर्दैनथे किनकि त्यसरी हेर्ने एकजना मानिस पनि सुन्दर बजारमा टिकेका थिएनन् ।
त्यही बेला लाटी सुन्दर बजारमा देखा परी, जसले सुन्दर बजारका मानिसहरुमा तरङ्ग नै ल्याइदियो । त्यसबेलासम्म सुन्दर बजार एउटा चल्तीको बजार भइसकेको थियो । राजमार्गभन्दा उत्तर र दक्षिणका गाउँहरुको केन्द्रका रूपमा स्थापित भइसकेको थियो । लाटीले दिनभरि मागेर जम्मा गरेको खानेकुरा उसलाई चाहिनेभन्दा बढी नै हुन्थ्यो । त्यसैले ऊ त्यसपछि अन्त कतै पनि गइन ।
स्वभावले जिद्दी थिई लाटी । त्यत्तिकै जण्ड पनि । उसको मुखबाट अ र आ बाहेक अरु स्वर उच्चारण हुँदैनथ्यो । तिनै स्वर उच्चारण गरेर ऊ केही न केही गुन्गुनाइरहन्थी । ऊ कहाँबाट कसरी आई, कसैले थाहा पाएन । त्यसभन्दा अगाडि पनि सुन्दर बजारमा पागलहरु नआएका होइनन् । तर, अहिलेसम्म त्यति उमेरकी तरुनी केटी पागल भएर आएकी थिइन । यदि ऊ लाटी हुँदिनथी भने अहिले कुनै राम्रो घरमा बिहा गर्न ठिक्क परेकी केटी हुन्थी । एउटा कारण यही पनि थियो, जसले गर्दा त्यहाँका मानिसको ध्यान लाटीले तानेकी थिई ।
सुरुमा त त्यहाँका केटाहरु लाटीको पछाडि रमिते भएर नै मडारिन थाले । तिनीहरुले लाटीलाई चिढिने गरी जिस्काउँथे । लाटी धारे हात लाउँदै आफ्नै शैलीमा गाली गर्थी । अनि आजित भएर जथाभावी ढुङ्गाले हिर्काउँथी । तर, केटाहरुले जिस्काउन छाड्दैनथे । ऊ आफैं चिच्याउन थाल्थी । आफ्नै कपाल लुछ्न थाल्थी । आवेशमा गुप्ताङ्ग खोलेर देखाइदिन्थी । अनि मात्र केटाहरु खितिती हाँस्दै त्यहाँबाट हिँड्थे ।
लाटी सबैभन्दा बढी अराजक माग्ने बेलामा हुन्थी । नदिउन्जेलसम्म झर्को लाग्ने गरी कराइरहन्थी । कसैले उसलाई धपाउन लठ्ठी उज्याउँथे, कोही पानी खन्याउन खोज्थे । तर, लाटी डराउन्नथी । धारे हात लगाउँदै गाली गर्थी । त्यतिले नमाने ढुङ्गा टिपेर हिर्काउन खोज्थी । मानिसहरु आजित भएर पहिले नै दिन थालेका थिए । तिनीहरुले प्रहरीमा उजुरी पनि हाले । तर, लाटीलाई थुनामा राख्ने कसरी ? प्रहरीले उसलाई जगल्टाएर धपाउन खोजे तर लाटी पनि कम थिइन । उसले पनि उनीहरुलाई ढुङ्गाले हिर्काई । त्यसपछि मानिसहरु आफ्ना सर्वमान्य नेता बिसनाथ बाबुकहाँ गए । तर, बिसनाथ बाबुले भने उल्टै तिनीहरुलाई नै सम्झाइबुझाई पठाए ।
त्यसपछि लाटी त्यहाँ बिसनाथ बाबुपछि सर्वाधिक प्रभावशाली भई । मानिसहरु तिनलाई पर देख्नेबित्तिकै खानेकुरा ठीक पार्न थाले । प्रहरीहरु तिनलाई देख्नेबित्तिकै तर्किन थाले । तर, त्यहाँका केटाहरुले भने अझै पनि आफ्ना आफन्तहरुबाट लुकेर लाटीलाई जिस्काउन छाडेनन् ।
जब लाटीको पेट उठेको देखियो, सुन्दर बजारमा एक किसिमको भुइँचालो नै आयो । प्रत्येक मानिसका मुखबाट लाटीको पेटको चर्चा सुनिन थाल्यो । कसैका लागि त्यो ठट्टाको विषय बन्यो । कसैका लागि त्यो सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय पनि बन्यो । केही बुद्धिजीवी जो आफूलाई सामाजिक रूपले प्रतिष्ठित ठान्थे, तिनीहरुले लाटीलाई पेट बोकाउने मानिसको खोजी गरिपाऊँ भनेर थानामा निवेदन हाले । पटक-पटक बिसनाथ बाबुकहाँ पञ्चायती बसाउनका लागि धाउन थाले । तर, कोहीकोही भने नराम्ररी झस्के । जसका रातका निद्रासमेत गायब भए । यो तिनै मानिसहरुको कथा पनि हो ।
सई प्रेमबहादुर थापा
"साप, लाटीले त पेट बोकी ।"
उसले पहिलो पटक बच्चु यादवको मुखबाट सुन्यो । पूरै रक्तसञ्चार अवरुद्ध हुने गरी मुटु ढुक्क भएको थियो उसको । मानौं, ऊ उभिएको जमिन एक्कासि भास्सिएको होस् र ऊ कुनै विराट अन्धकारमा खसिरहेको होस् । एक क्षण त ऊ चेतनाशून्य नै भएको थियो । ६ महिना जति भएको थियो ऊ सुन्दर बजारमा आएको । बच्चु यादव त्यसबेलादेखि उसको सहायक थियो ।
उसले बच्चुको कालो अनुहार नियाल्यो । सुरुमा अलि व्यङ्ग्यात्मक मुस्काए पनि सईको तनाव देखेर ऊ पनि गम्भीर भयो ।
"मैले आफैं हेरेर आएको, चार महिनाको त पुग्यो होला ।"
बच्चुलाई सबै थाहा हुन्छ । ऊ त यहीँको मान्छे । आफ्नी स्वास्नी र लालाबालासँग बसेको छ । कति महिनाको पेट कत्रो हुन्छ, उसलाई सबै थाहा छ । नहुनु पनि कसरी ? प्रत्येक वर्ष उसकी स्वास्नी सुत्केरी जो हुन्छे । यदि सबै बाँचेका हुन्थे भने त उसका सन्तानको सङ्ख्या दर्जन त पुग्थ्यो होला । परिवार त उसको पनि नभएको कहाँ हो र ? एउटी स्वास्नी र एउटा छोरा छ । सरुवा भइरहन्छ । त्यसैले हो सँगै राख्न नसकेको ।
उसले लाटीबारे पनि पहिलोपटक बच्चुबाटै थाहा पाएको थियो । सरुवा भएर आएको पहिलो दिन उसले त्यस ठाउँको बारेमा बुझ्न खोज्दा बच्चुले सबैभन्दा पहिले लाटीकै बारेमा भनेको थियो ।
"साली सफा मात्र भएर बस्दी हो त ऊ जति च्वाँक केटी पूरै सुन्दर बजारमा कोही छैन साप । … भगवानले पनि यतिको राम्री केटीलाई पागल नै चाहिँ बनाउनु हुँदैनथ्यो… ।" उसलाई त्यसबेला नै आफू कुनै नौलो संसारमा प्रवेश गरेझैं लागेको थियो ।
"एउटा कुरा भनुँ साप ?"
बच्चुले उसलाई कुनै गुढ कुरा भन्न लागेझैं साउती गऱ्यो तर भन्ने बेलामा जोडसँग भन्यो, "साला यहाँका सबै मर्दहरु दिनमा लाटीसँग तर्किन्छन् । राति सबै मौकाको ताकमा बसेका हुन्छन् ।"
त्यस कुराले उसलाई झन् भित्रैबाटै कुत्कुत्याएको थियो । बच्चुले त्यसो भनिरहँदा ऊ पनि नहाँसी बस्न सकेन ।
"तर साप, सबै लाटीसँग डराउँछन् । किनकि लाटी कोहीसँग डराउन्ने ।"
उसको उत्सुकता झनझन् बढिरहेको थियो ।
"…अरुको त के कुरा साप, मेरै पनि ६ वटा छोराछोरीको टेन्सन नहुँदो हो भने मै बिताइदिन्थेँ ।"
बच्चु त्यसपछि एकक्षण जोडले हाँस्यो । ऊ आफैं पनि लाटीको एकोहोरो व्याख्यानले एकोहोरिएको थियो । केही क्षणपछि मात्र ऊ मुस्काएको थियो ।
"तर साप, उसले पुलिस देख्नै हुँदैन, ढुङ्गाले हिर्काउन थालिहाल्छे ।"
उसको मनिस्थिति बुझेर होला । बच्चुले मुस्काउँदै भनेको थियो ।
लगभग त्यसको एक महिनापछि उसले लाटीलाई बलात्कार गऱ्यो । एक महिनाभरिमा उसले सुन्दर बजारलाई राम्ररी बुझिसकेको थियो । बिसनाथ बाबुसँग पनि उसको राम्रो हिमचिम भइसकेको थियो । लाटी बच्चुले वर्णन गरेजस्तो राम्री त होइन तर उसका फक्रिन लागेका अङ्गहरु भने एउटा पुरुषको पुरुषत्वलाई हाँक दिन काफी थिए ।
त्यो रात ऊ ढिलो गरी गस्तीबाट फर्किंदै थियो । लाटी एक्कासि गाडीको अगाडि उभिन पुगी । त्यसपछि दौडँदै नजिकैको अर्धभग्न अवस्थाको घरभित्र छिरी, जहाँ ऊ बस्ने गर्थी ।
"यसलाई डर लाग्दैन कि के हो ?" ऊ करायो ।
"डर लाग्ने भए त यो सद्दे भइहाल्थी नि साप," बच्चुले आफ्नै शैलीमा भन्यो ।
त्यसबेलासम्म उसले सारा कुरा सोचिसकेको थियो । सबैभन्दा पहिले उसले गस्तीमा आफूसँग भएका जवानहरुलाई चौकीमा लगेर छोड्यो । त्यसपछि बच्चुलाई पुऱ्याउन उसको घर गयो । अनि ऊ सरासर लाटी बस्ने घरतिर हिँड्यो । उसले गाडी अलि पर नै रोक्यो । चारैतिर नियाल्यो । सबैतिर सुनसान थियो । लाटी भने आफ्नै तालमा गुन्गुनाइरहेकी थिई । उसको उपस्थितिदेखि पूरै बेखबर थिई ।
एक्कासि आफ्नो अगाडि मान्छे पाउँदा सुरुमा लाटी आत्तिएर चिच्याई । तर, लगत्तै उसले लाटीको मुख थुनिदियो । त्यसपछि उसले लाटीका संवेदनशील अङ्गहरु चलाउन थाल्यो । पहिले त लाटीले प्रतिकार नै गरी । तर, ऊ यस्तो कुरामा अभ्यस्त थियो । आफ्नै स्वास्नीलाई समेत फकाएरभन्दा जबर्जस्ती सम्भोग गर्न मन पराउँथ्यो ।
सुरुमा प्रतिकारका लागि छट्पटाएकी लाटी क्षणभरमै उत्तेजनामा छट्पटाउन थाली । त्यसपछि उसले लाटीलाई सफलतापूर्वक बलात्कार गऱ्यो । त्यसपछि पनि ऊ दुई-तीनपटक लाटीकोमा गएको थियो । ती सबै कुरा बच्चुलाई थाहा थियो ।
त्यो साँझ ऊ बच्चुलाई लिएर भट्टीभित्र छिऱ्यो ।
"साला, लाटीले पेट बोक्दा पनि यति टेन्सन ?"
उसलाई अझसम्म विश्वास लागिरहेको थिएन । लाटीले पेट बोक्न सक्छे भनेर उसले कल्पेकोसम्म थिएन ।
"यसभन्दा अगाडि पनि तीनवटीलाई भ्याएकै हो । तर, साला कसैले पनि पेट बोकेन ।"
"त्यसो भए पक्कै पनि तिनीहरु लाटी थिएनन् होला साप ।"
"हो ठीक भन्यो ।"
सईले टाउको हल्लाउँदै भन्यो । त्यसपछि बल्ल बच्चुले भनेको कुरामा घोरियो । अनि बच्चुलाई गाली गर्दै कराउन थाल्यो, "साला, के ठान्छस् ? लाटी–लाटीलाई मात्र खोजेर कामकुरो गर्ने सोचिस् ?"
"त्यसो होइन साप, यो केटी लाटी नहुँदी हो त आफ्नो पेटको व्यवस्थापन आफैंले नै गरिहाल्थी नि ।"
सई घोरियो । उसलाई रक्सी लागिसकेको थियो ।
"साला लाटीलाई भ्याउँदा पनि यत्रो टेन्सन ?" ऊ आफैंसँग बर्बरायो ।
"एउटा कुरा भनूँ साप ?"
उसले सईको मुख ताक्यो । तर, उसले हुन्छ नभन्दै भन्न थाल्यो, "यदि लाटीले जन्माएको बच्चाको अनुहार ठ्याक्कै तपाईंसँग मिल्यो भने न हो समस्या हुने, नत्र केको टेन्सन ?"
बच्चुलाई पनि रक्सी लागिसकेको थियो । नत्र उसले यस्तो मूर्खतापूर्ण कुरा कहिल्यै गर्दैनथ्यो ।
"त्यसो भए त्यसले बच्चा नजन्माउन्जेल हातमा हात बाँधेर बसूँ ? उता उसको पेटमा मेरो गलाको पासो बन्दै गर्छ र मचाहिँ त्यो कहिल्यै बाहिर आउला र मेरो घाँटी अँठ्याउला भनेर कुरेर बसूँ ?"
अब भने बच्चु पनि गम्भीर भयो । एकक्षण घोत्लियो । अनि गाह्रोसँग डराउँदै भन्यो, "साप, बिसनाथ बाबुसँग गफ गर्ने हो कि ? उसले यस्ता कुरा मिलाउन खुब जानेको छ ।"
सई डरायो तर फेरि गम्यो । कुरा ठीकै हो । बिसनाथ बाबुलाई ऊ चाहिन्छ र उसलाई बिसनाथ बाबु । त्यसपछि उसले आफूलाई अलि हलुका महसुस गऱ्यो । राति उसले बच्चुलाई आफ्नो क्वार्टरमा लग्यो । बच्चु रक्सी खाएपछि कहिल्यै घर जाँदैनथ्यो ।
राति उसले सपनामा लाटीलाई नै देख्यो । सुरुमा त उसले बलात्कार गरेका तीन वटी केटीलाई देख्यो । त्यसपछि उसले आफ्नी स्वास्नीलाई जबर्जस्ती गरेको सपना देख्यो । तर, जब सबै उत्तेजित अवस्थामा हुन्थे, सबै लाटीमा रूपान्तरित हुन्थे । सबै लाटी जसरी नै छट्पटाउँथे । पीडामा लाटी जसरी नै चिच्याउँथे ।
उसले बल गरेर लाटीलाई त्यहाँबाट हटाउन खोज्थ्यो तर सबैलाई हटाउँदै लाटी त्यहाँ आइपुग्थी । अचानक लाटीले उसलाई अत्याउने गरी चिच्याउन थाली । एक्कासि लाटीको पेट ठूलो हुन थाल्यो । ऊ डरायो र त्यहाँबाट उठ्न खोज्यो तर सकेन । लाटीको चिच्याहटले आत्तिएर ऊ पनि चिच्याउन खोज्यो । तर, उसको घाँटीबाट आवाज नै निस्केन । ऊ निस्सासिन थाल्यो । अन्तमा उसले आफ्नो शरीरको सारा बल एकत्रित गऱ्यो र आफूलाई जोडसँग घचेट्यो । ऊ ओछ्यानबाट तल पछारियो । पुसको चिसो रातमा पनि ऊ पसिनाले भिजेको थियो । ओछ्यानमा भने बच्चु अझै मस्त घुरिरहेको थियो ।
"साली, सपनामा पनि तर्साउँछे," ऊ आफैंसँग बर्बरायो ।
"अहिले गएर सालीको पेटमा दुई चार लात दिन्छु, टन्टै साफ ।"
ऊ बाहिर निस्क्यो । चिसो सिरेटोले उसको नशा तत्क्षणमै गायब भयो । उसले घडी हेऱ्यो । बिहानको ४ बज्न लागेको थियो । तर, जाडोले गर्दा मध्यरातझैं सुनसान थियो । ऊ सरासर लाटी बस्ने घरतिर हिँड्न थाल्यो । उसको हिँडाइसँगै उसको मुटुको गति पनि तीव्र हुन थाल्यो । पूर्णिमाको उज्यालोमा त्यो अर्धभग्न घर पनि लाटीजस्तै लाग्यो उसलाई ।
ऊ नजिकै पुग्यो । लाटी घरको एउटा भित्तोमा टाँसिएर सुतेकी थिई । चिसोले घोप्टिएर सुत्दा घुँडाले उसको पेट छोएको थियो । त्यो पेट उसलाई चलमलाएझैं लाग्यो । एक क्षणसम्म ऊ त्यसै उभिरह्यो । मानौं कुनै ठूलै बोझले थिचेको थियो उसलाई । चिसो रातमा फेरि एकपटक पसिनाले भिजेको थियो ऊ । खै कुन अदृश्य शक्तिले रोकेको थियो उसलाई । त्यहाँबाट उसको पाइला उठेन । उसले उठाउनै सकेन । पर मन्दिरमा घण्टा बजेपछि ऊ झसङ्ग भयो । मानिसहरु ब्युँझन थालिसकेका थिए । ऊ हतारहतार त्यहाँबाट फर्कियो ।
ऊ फर्किंदा बच्चु उठिसकेको थियो । उसलाई त्यहाँ नपाएर आत्तिइरहेको थियो । पसिनाले निथ्रुक्क भिजेको उसको शरीर र थकित अनुहार देखेपछि ऊ झन् आत्तियो ।
"के भयो साप ?"
"आज बिसनाथ बाबुलाई जसरी पनि भेट्नु छ ।"
उसले यति मात्र बोल्यो र ओछ्यानमा पछारियो ।
सर रामप्रसाद शर्मा
"यो सबै त्यो झरीले गर्दा हो," ऊ बर्बरायो । उसका विद्यार्थीहरु अलमलिए । केही दिनदेखि त्यसरी नै बर्बराउन थालेको थियो ऊ । पुसको महिनामा पनि कस्तो झरी ?
"सर के भयो ?"
एकजना विद्यार्थीले उठेरै सोध्यो । केही दिनदेखि निकै नै फरक हुन थालेको थियो ऊ । त्यो कुराको अनुभव उसका विद्यार्थीहरुले समेत गर्न थालेका थिए, जसले उसलाई झनै तनाव दिएको थियो ।
"केही होइन ।"
ऊ झन् हडबडायो । कक्षाबाट आत्तिँदै निस्क्यो । सरासर आफू बस्ने कोठातिर गयो । सुन्दर बजारको त्यस स्कुलमा बाहिरबाट आएर पढाउने ऊ एकमात्र शिक्षक थियो । त्यसैले ऊ स्कुलकै एउटा कोठामा बस्थ्यो । ऊ कोठाभित्र पस्यो । चुकुल लगायो । ओछ्यानमा डङ्ग्रङ्ग ढल्यो । त्यसपछि फेरि बर्बराउन थाल्यो ।
"यो सब त्यै झरीले गर्दा हो ।"
उसले ६ महिनाजति अगाडिको कुरा सम्झिन थाल्यो । साउनको महिना थियो त्यो । त्यो राति पनि ऊ बिसनाथ बाबुको घरमा ट्युसन पढाएर फर्किँदै थियो । एक्लै बस्ने भएकाले प्राय: बिसनाथ बाबुकै घरमा खान्थ्यो । त्यसैले प्राय: ऊ ढिलो नै फर्किने गर्थ्यो । यसै पनि झरीको मौसम थियो । फर्किने बेलामा एकक्षण झरी रोकिएकाले ऊ हतारहतार हिँडिरहेको थियो । लाटी बस्ने घरअगाडि पुग्नेबित्तिकै पानी जोडले पर्न थाल्यो । ऊ दौडिँदै त्यो घरभित्र पस्यो । त्यतिबेला त्यहाँ कोही पनि थिएन ।
उसले आफ्नो शरीरको पानी टक्टकायो । बेलाबेलामा लाग्ने पानीसहितको हावाले उसलाई चिसोको अनुभूति गरायो । उसले खल्तीबाट चुरोट झिक्यो र सल्काउन खोज्यो । त्यहीबेला लाटी खुर्र दौडेर आई । ऊ तर्स्यो । उसको मुखबाट चुरोट पनि खस्यो ।
"धत् लाटी कहिँकी ।"
उसले लाटीलाई हकाऱ्यो । चुरोट पनि टिप्यो । लाटी भने ऊ तर्सेको सुनेर ताली बजाउँदै हाँस्न थाली । अँध्यारोले केही पनि देखिँदैनथ्यो । तर, पनि पानीको रुझानले गर्दा निस्केको लाटीको शरीरको मयलको गन्धले भने ऊ नराम्ररी झस्क्यो । लाटी उसको नजिक नै आइसकेकी थिई ।
"के चाहियो ?"
उसले हकारेर सोध्यो । लाटीले उसको चुरोटतिर हात बढाई । उसले हतपत चुरोट लाटीलाई थमाइदियो । लाटी फेरि जोडसँग हाँसी र चुरोट तान्न थाली । एक-दुई सर्को तान्नेबित्तिकै लाटी खोक्न थाली । शायद पहिलोपटक चुरोट खाएकी होली । उसले हतारहतार चुरोट फेरि उसैलाई थमाइदिई । त्यसबेलासम्म ऊ लाटीको गन्धले लठ्ठिइसकेको थियो । चुरोट हातमा लिनेबित्तिकै उसलाई बडो सकस अनुभव भयो । एकक्षण उसले चुरोटलाई नियाल्यो अनि बिस्तारै ओठमा च्याप्यो । त्यतिबेला बडो रोमाञ्चित अनुभव गऱ्यो उसले ।
"तँलाई त चुरोट खान पनि आँउदैन । आइज बस् ! तँलाई म चुरोट खान सिकाँउछु ।"
उसले लाटीसँग लाडिएर भन्यो । लाटीलाई आफूसँग टँसाउँदै बसायो । उसले चुरोटको सर्को तान्यो र त्यसको धूवाँ लाटीको ओठनजिकै लगेर बिस्तारै छोड्न थाल्यो । यो क्रम केही बेरसम्म उसले निरन्तर दोहोऱ्याइरह्यो ।
शरीरको आफ्नै भाषा हुन्छ । त्यसको आफ्नै बुझाइ पनि हुन्छ । उनीहरु जतिजति बुझ्दै गए, त्यतित्यति अभ्यस्त हुँदै गए । उसलाई कुनै भाषाको जरुरी नै परेन ।
त्यो रात लाटीले उसलाई छोड्नै मानेकी थिइन । बडो अप्ठयारोसँग फुत्किएको थियो ऊ त्यहाँबाट । त्यसपछिका केही दिनसम्म त ऊ लाटीको अगाडि नै परेन । तर, जब रात पर्थ्यो, उसलाई त्यो रातको रोमाञ्चकताले बिथोल्न थाल्थ्यो । लाटीको छटपटाहटले उसलाई शान्तसँग सुत्न दिएन । लाटीका सुस्केराहरुले उसलाई पछिसम्म उद्वेलित गराउन थाले ।
त्यसपछि फेरि ऊ लाटीकोमा जान बाध्य भयो । निरन्तर गइरह्यो । यो क्रम तबसम्म रोकिएन, जबसम्म लाटीको पेट देखिएन, मानिसहरुले उसको पेटको कुरा गर्न थालेनन् ।
"यो सब त्यो झरीले गर्दा हो ।"
त्यहीबेला कसैले ढोका ढक्ढकायो । ऊ उठ्यो । र, दुवै हातले आफ्नो अनुहार पुछ्यो । मानौं, उसले आफ्नो तनाव पुछ्न चाहेको होस् । उसले ढोका खोल्यो । अगाडि हेडसरलाई देखेपछि नमस्कार गऱ्यो ।
"के भयो तपाईंलाई ? सन्चो छैन कि कसो ?"
हेडसरले उसको अनुहार हेर्दै सोध्यो । ऊ हाँस्न खोज्यो तर उसको ओठबाट मुस्कान निस्किँदै निस्केन ।
"विद्यार्थीहरु भन्दै थिए, तपाईं त एक्कासि क्लासबाट निस्किनुभयो अरे !"
ऊ झसङ्ग भयो । के के गऱ्यो उसले तनावमा ?
उफ् ! यसरी त मानिसहरुले ऊमाथि झन् शङ्का गर्न सक्थे ।
"केही होइन सर । यसो अलि टाउको दुखेको थियो," उसले आफूलाई सम्हाल्दै सानो स्वरमा भन्यो ।
"यसरी एक्लै बसेपछि त झन् टाउको दुखिहाल्छ नि । बरु हिँड्नुस्, अफिसतिर जाऊँ ! त्यहाँ अरू सरहरू पनि हुनुहुन्छ । गफ गर्नुस्, फ्रेस हुनुस् । तब पनि निको भएन भने क्लिनिकमा चेक गर्नुहोला ।"
ऊ केही बोल्न सकेन । लुरुलुरु हेडसरको पछि लाग्यो । अफिसमा अरू सरहरु हाँसेको उसले परैबाट सुन्यो । अलि नजिक पुगेपछि तिनीहरुले गरेका गफ पनि प्रष्टै सुनिन थाले ।
"लाटीले पेट बोकेको पनि यही जुनीमा देख्न पाइयो । अब योभन्दा पनि कलियुग केही हुन्छ ?"
त्यो संस्कृत पढाउने सरको आवाज थियो । त्यहाँ पनि लाटीकै चर्चा ? उसको पैतालाको चाल निकै नै गह्रुङ्गो भयो । अफिसभित्र प्रवेश गर्दा ऊ रातो भइसकेको थियो । हेडसर आफ्नो कुर्सीतिर लम्क्यो । ऊ भने सरहरु बसेको बेन्चको एउटा कुनामा बस्यो ।
"अरे के कुरा गर्नुहुन्छ ? तपाईंहर्को पुराणमा माछाले पेट बोक्न हुन्छ । यहाँ जाबो लाटीले पेट बोक्न नहुने ?"
एकजना सरले उसको कुरा काटेपछि सबै जोडसँग हाँस्न थाले ।
"छि…छि…, सरले पनि कस्तो कुरा गर्नुभएको ? त्यो जमाना अर्कै थियो, यो अर्कै हो । कलियुगमा पेट बोक्न धेरै थोक गर्नुपर्छ । लाटीको अनुहार सम्झनुस् त, परैबाट पायरिया गन्हाउँछ ।"
संस्कृत सरको बोलाइको तालसँगै उसको दाह्री पनि हल्लिरहेको थियो ।
"अरे सर पेट बोक्नलाई कहाँ अनुहार चाहिन्छ ? अर्कै कुरा चाहिन्छ ।"
त्यसपछि सबै अट्टहास गर्दै हाँस्न थाले । संस्कृत सर पनि हाँस्न थाले । आफ्नो गरिमाको ख्याल गर्दै हेडसर पनि मुख लुकाएर हाँस्न थाले । त्यहाँ नहाँस्ने केवल ऊ मात्र थियो ।
"यो ठट्टाको विषय होइन," सबैको हाँसो थामिएपछि हेडसर गम्भीर देखिए ।
"कसैको निम्ति पनि यो राम्रो कुरा होइन । न हाम्रो निम्ति, न त यो समाजको निम्ति । अरू गाउँका मानिसहरुले समेत कुरा काट्न थाले । गर्नेले केही क्षणको मजा गरे पनि त्यसको परिणाम सबै समाजले कदापी बेहोर्दैन । ढिलोचाँडो थाहा भई नै हाल्छ त्यो कसको पेट हो भनेर । अचेल त कति थरीका टेस्टहरु पनि चलेका छन् । बच्चा जन्मेपछि त्यसको बाउको ठेगान कसो नलाग्ला ?"
हेडसरले बोलेका प्रत्यक शब्दहरुले उसको मुटुमा सुलझैं घोच्न थाल्यो ।
"ए, साँच्चै शर्मा सर…!" हेडसरले उसैलाई बोलाएपछि ऊ झस्क्यो ।
"बिसनाथ बाबुले पञ्चायतीका बारेमा तपाईंसँग केही गफ गरे कि गरेनन् ? तपाईं त त्यहाँ दिनदिनै गइरहनुहुन्छ ।"
केही दिनदेखि बिसनाथ बाबु तनावमा देखिन्थे । तर, ऊ आफैं पनि तनावमा भएकाले खासै वास्ता पनि गरेको थिएन । त्यसैले तिनीहरुबीच दोहोरो कुराकानी खासै भएको थिएन ।
"खै, केही दिनदेखि आफैं तनावमा देखिनुहुन्छ । खासै त्यस्तो कुराकानी केही भएको छैन," उसले बिस्तारै भन्यो ।
"उहाँचाँहि किन तनावमा हुनु नि ? लाटीको पेट कहीँ उहाँकै त होइन नि ?" एउटा सरले फेरि ठट्टा गर्दै भन्यो ।
"कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईं पनि ? राजनीति गर्ने मान्छे, आफ्नै ठाउँमा यस्तो घटना घटेपछि चिन्ता त भइहाल्छ नि । नत्र विपक्षीहरुले यसलाई चुनावमा प्रचारको विषय बनाइहाल्छन् ।"
हेडसरले सारा राजनीति बुझेझैं गरी सम्झायो । तर, उसलाई राजनीतिभन्दा पनि पञ्चायती शब्दले बढी नै आतंकित गरायो । विभिन्न सम्भावनाहरुले ऊ घोरिन थाल्यो । लाटीको पेट उसको हो भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै पञ्चायतीले उसलाई लाटीसँग विवाह गर्न बाध्य पार्थ्यो । त्यसको कल्पनाले समेत उसको शरीरमा काँडा उम्रन थाल्यो ।
सर भनेर कत्रो प्रतिष्ठा छ उसको ! अझ बिसनाथ बाबुसँगको सम्बन्धले त सुन्दर बजारमा उसको शानै बेग्लै थियो । घरबाट पनि बिहा गर, केटी खोज्दिन्छु भनेकै हो । उसैले हो नमानेको । सुन्दर बजारमा कम्तीमा पनि एउटा घर बनाएर मात्र बिहा गर्ने रहर थियो उसको । सारा भविष्य अन्धकार देख्न थाल्यो उसले ।
"तपाईं हामीले बिसनाथ बाबुको चिन्ता के लिनुहुन्छ ? ऊजतिको खुराफाती दिमाग भएको मानिस पूरै जिल्लामा कोही छैन । चालचालनमा त ऊ शकुनीको पनि मामा हो," बडो अनुभवी शैलीमा संस्कृत सर बोल्न थाल्यो ।
"यदि त्यो पेट बिसनाथ बाबुकै हो भने पनि अरूलाई जिम्मा लगाउन सक्ने खुबी छ उसमा, कि कसो शर्मा सर ?"
ऊ झस्क्यो । संस्कृत सरले बोलेको सम्झ्यो र अनायासै मुस्कायो । त्यसरी निकै दिनपछि मुस्काएको थियो ऊ । मनमनै आफूसँग भन्यो, "आज जसरी पनि बिसनाथ बाबुसँग गफ गर्छु ।"
त्यो दिन झरी परिरहेको थियो । जब बिसनाथ बाबुले पहिलोपटक लाटीलाई देखेको थियो । झरीमा रुझिरहेकी लाटीले ऊभित्र यस्तो आगो बालिदियो कि उसले त्यसलाई जति निभाउन खोज्थ्यो, त्यो त्यति नै सल्कन थाल्यो ।
लाटी फोहोरी थिई । झुम्री थिई । शायद कति दिनदेखि नुहाएकी पनि थिइन । धूलो र मयलले शरीर तथा कपालको रङसमेत थाहा हुन्थेन । तर, लाटी तरुनी थिई, जुन ऊ वर्षाको पानीमा रुझेको बेला सबैभन्दा बढी थाहा हुन्थ्यो ।
उसको शरीरको बनावटले बिसनाथको मनस्थितिलाई कसरी खलबल्याइदियो भने उसले त्यस दिन आफ्नी स्वास्नीलाई सबैभन्दा नराम्री देख्यो । झोल्लिएको छाती, निस्केको पेट, चाउरिएको छाला, नाभीभन्दा तल अनगिन्ती सेता धर्साहरु, मानौं ती कुनै धारिलो चक्कुले चिरिएर बनेका घाउका डामहरु हुन् । राम्ररी नकोरिएको कपाल सबै एकैपटक ख्याल गऱ्यो उसले ।
पहिले त ऊ स्वास्नीबाटै सन्तुष्ट थियो । तर, लाटीलाई देखेको दिनदेखि स्वास्नीतिर फर्केर सुत्न छोडेको थियो । पछि त छोराछोरीको कारण देखाई ओछ्यान पनि फेऱ्यो । तर, आफ्नो राजनीतिक जीवनको लागि निकै सजग थियो ऊ । सुन्दर बजारको एक किसिमले राजा नै थियो । पार्टीभित्र पनि उसको पकड राम्रै थियो । त्यसैले आउँदो संसदीय निर्वाचनमा उसले टिकट पाउने कुरा पक्का थियो ।
दिनभर पार्टीको कार्यक्रममा व्यस्त भए पनि राति भने लाटीतिरै एकोहोरिन्थ्यो । जति बिर्सन खोज्दा पनि सकेन, जसले उसको छटपटीलाई झन् बढायो । अन्तमा लाटीकोमा जाने निश्चय गऱ्यो । त्यसका लागि व्यापक तयारी पनि गऱ्यो उसले ।
एड्सको रोकथामका निम्ति जनचेतना जगाउने अभियान चलाउँदा उसले निकै कन्डम जम्मा पारेको थियो । लाटीलाई फकाउन गाह्रो नहोस् भनेर भियग्रा पनि किन्यो । राति अजीव किसिमका लुगामा निस्किन लाग्दा उसकी स्वास्नीले नसोधेकी पनि होइन तर पार्टीको कार्यक्रममा जान लागेको भनेर ढाँट्यो । चिनेपछि लाटीले अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छे कि भनेर मास्क पनि लगायो ।
एक्कासि त्यस्तो अचम्म लाग्दो मानिस देखेपछि लाटी आत्तिएर चिच्याई । तर, मध्यरातमा लाटीको चिच्याइसँग कसको वास्ता ? लगत्तै उसले ल्याएको खानेकुरा देखेपछि लाटी लोभिई पनि । उसले त्यससँगै भियग्रा पनि मिसायो । केही क्षणमै लाटी उत्तेजनामा छट्पटिन थाली । लाटीको उत्तेजनालाई थेग्न उसले पनि त्यो औषधि खायो । त्यसपछि बडो सहज र सजगताका साथ उसले लाटीसँग सम्भोग गऱ्यो । त्यसपछि पनि ऊ पटक-पटक त्यहाँ गएको थियो ।
लाटीको पेट देखिन थालेपछि निकै तनावमा थियो ऊ । सबैभन्दा तनाव त उसलाई त्यस कुराले गरायो– सारा साधन अपनाउँदा पनि लाटीले पेट कसरी बोकी ? एक वर्षभित्र चुनाव हुँदै थियो । त्यतिबेलासम्म त लाटीले बच्चा पनि जन्माइसक्ली । त्यसभन्दा अगाडि नै उसले केही गर्न चाहन्थ्यो । तर गर्ने के ? उसले अझैसम्म केही निश्चय गर्न सकेको थिएन । यो त्यस्तो काम थियो, जुन उसले कसैलाई नभनी आफैं गर्नुपर्थ्यो । तर, जब उसले आफूलाई एक्लो ठान्थ्यो, आफैंलाई सबैभन्दा निरीह पनि पाउँथ्यो ।
त्यस दिन बिहानै सई प्रेमबहादुर थापालाई एक्कासि आफ्नो बैठक कोठामा देखेपछि ऊ चिसो भएको थियो । सई पनि तनावमै देखिन्थ्यो । लाटीकै विषयमा कुरा गर्न आएको त होइन ? कहीँ ऊमाथि नै शङ्का गरिएको त छैन ? बिहानको फक्रिँदो उज्यालोमा पनि अँध्यारिँदै गइरहेको थियो ।
"बिसनाथ बाबु, केही जरुरी गफ गर्नु थियो ।"
सईले अप्ठ्यारोसँग बोलेको मात्र सुन्यो उसले । ऊ आफैं पनि आफूभित्रको तनाव लुकाउन सङ्घर्षरत देखिन्थ्यो । उसले केही बोलेन । भन्नका लागि इसारा मात्र गऱ्यो ।
जब सई बोल्न थाल्यो, उसको अनुहारको भाव परिवर्तन हुन थाल्यो । कहिलेदेखि मुर्झाएको अनुहार एक्कासि फक्रिन थाल्यो ।
उसले आवेशमा टेबल ठोक्यो । काम गर्नेले भर्खरै राखेर गएको दुई वटा चियाको गिलासमध्ये एउटा घोप्टियो । लगत्तै उसले आफूलाई सम्हाल्यो ।
सई भने उसको प्रतिक्रिया देखेर अलमलियो, जसले उसको तनावलाई झनै बढायो । तर, बिसनाथ बाबुले भने उत्साहित हुँदै काम गर्नेलाई बोलायो । टेबल सफा गर्न लगायो र अर्को कप चिया पनि मगायो ।
"अरे सई साहब, चाय लिनुस् ।"
तर, सईको भने ओठमुख सुकिसकेको थियो । बिसनाथ बाबुको अप्रत्याशित व्यहवार देखेर ऊ झन् आत्तिएको थियो ।
"म धेरै तनावमा छु बिसनाथ बाबु । कति रातदेखि राम्ररी सुत्न सकेको छैन । तपाईंसँग ठूलो आश गरेर आएको छु ।"
"अरे चिन्ता–सिन्ता छोड्नुस्," बिसनाथ बाबुले उसलाई रोक्दै भन्यो ।
"तपाईंलाई हामी चाहिन्छ अनि हामीलाई तपाईं । म जाबो त्यति काम पनि नगरौंला त । … आखिर निवेदन तपाईंको थानामा परेकै छ । सोच्ने म छँदैछु । कुनै उपाय निस्केपछि कुराकानी अगाडि बढाउँला । यसमा तनावको के कुरा छ र ?"
बिसनाथ बाबुले त्यति भनेपछि सईले चैनको सास फेऱ्यो ।
"तर तपाईंजत्तिको मान्छेले यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो । गर्दा पनि बजारमा यतिका धेरै साधनहरु… ।"
त्यसपछि बिसनाथ बाबुले सईलाई नैतिकतादेखि कन्डम प्रयोगसम्मको लम्बेतान व्याख्यान दियो । सई भने टाउको निहुऱ्याएर सुनीमात्र रह्यो । जबसम्म बिसनाथ बाबुले जान भनेन, तबसम्म ऊ त्यहाँबाट गएन ।
अर्को दिन सर रामप्रसाद शर्मा आयो । अब भने उसलाई अचम्म लाग्न छोडिसकेको थियो । किनकि सुरुमा लाटीलाई भोग्ने ऊ आफू एक्लो हुँ भन्ने ठान्थ्यो । तर, जब सई प्रेमबहादुर थापा आयो, त्यतिबेलै अरू पनि आउन सक्ने अनुमान उसले गरेको थियो । तर, उसले रामप्रसाद सरको अपेक्षा भने गरेको थिएन । ऊ त त्यस्तो मानिसको खोजीमा थियो, जसलाई लाटीको पेट जिम्मा लगाउन सकियोस् ।
त्यसको केही दिनपछि सुन्दर बजारकै सबैभन्दा ठूलो व्यापारी सीताराम अग्रवाल आयो । तर, ऊ आफ्नो लागि नभएर छोराको लागि आएको थियो, जो एक रात त्यहाँको नामी रेस्टुरेन्टबाट रक्सी खाएर फर्किंदा लाटीकोमा पसेको थियो ।
सबैभन्दा अन्तिममा आएको थियो पण्डित चन्द्रकान्त झा । ऊ पूरै सुन्दर बजारमा एकमात्र पुरोहित थियो । त्यसले बिसनाथ बाबुलाई रिस र अचम्म दुवै एकैपटक पाऱ्यो । वर्ष दिनअगाडि मात्र तिनै चन्द्रकान्त झाले उसको आमाको किरिया गरेको थियो । एक रात ढिलो गरी जजमानीबाट फर्किंदा लाटीसँग रात बिताएको थियो ।
त्यसरी बिसनाथ बाबुकोमा आउने प्रायः एक किसिमले साँठगाँठ राख्नेहरु नै थिए । त्यसैले लाटीको पेटको जिम्मा लगाउन मिल्ने एकजना मानिस पनि उसले पाएन । त्यो पेट तिनीहरुमध्ये जो कसैको पनि हुन सक्थ्यो । समय जति बित्न थाल्यो, तिनीहरु पनि त्यति नै आत्तिन थाले । अन्तमा उसले सई प्रेमबहादुर थापासँग सल्लाह गरेर पञ्चायतीको मितिको घोषणा गऱ्यो ।
"ए हजुर ! सुन्ने कोही हुनुहुन्छ ? लाटीको पेट मेरै हो । म जहाँ पनि कबोल्न तयार छु । लाटीको पेट मेरै हो ।"
त्यसपछि ऊ जोडले रुन थाल्यो । मध्यरातमा उसको रुवाइको आवाज चर्को भयो ।
"माचि… यति राति कराउँछ ।"
हवल्दार आँखा मिच्दै उठ्यो र छेवैमा सुतिरहेको सिपाहीलाई एक लात्ती दियो । शायद कुनै सपना देखिरहेको थियो उसले । तर्सिँदै उठ्यो ।
"जा ! तेरो बाऊलाई गएर हेर् ! के भयो ?"
सिपाही गयो । उसले ढोका खोल्यो । कोठाको ठिक्क बीचमा एउटा ट्रकको टायर झुन्डिएको थियो र टायरको बीचमा झुन्डिएको थियो सुर्जा चमार । पूरा नाम सुरज कुमार मोची ‘चमार’ । हात र खुट्टा दुवै बाँधिएका थिए उसका । केवल मुख र आँखा खुला थिए, जहाँबाट क्रमशः ऱ्याल र आँसु निरन्तर बगिरहेको थियो ।
"ए हजुर, लाटीको पेट मेरै हो । म जहाँ पनि भन्न तयार छु । तर, मलाई यहाँबाट झार्नुस् ।"
तर, सिपाही उसको नजिक पनि गएन ।
"भो भो नकरा ! मैले खोल्न मिल्दैन । हल्दार सापलाई बोलाएर आउँछु ।"
त्यसपछि ऊ कराएन । तर, उसका आँखाबाट आँसु र मुखबाट ऱ्याल भने बग्न छोडेन ।
सबै कुरा यो एकदिनमै कसरी भयो ? यति अचानक कसरी भयो ? कहाँ बिरायो उसले ? अहँ उसको दिमागले उसलाई कुनै कुराको उत्तर दिएन । उसले सबै कुराहरु बिस्तारै सम्झन थाल्यो । बिहानसम्म पनि उसलाई त्यसको पूर्वानुमानसमेत थिएन । उसका आफ्ना बा-आमा थिएनन् । काकाको घरमा बस्थ्यो । एकाबिहानै ऊ आफ्नो काकासँग घर बनाउनका लागि चाहिने करनी, हथौडा, छेनी र तेगारहरु बोकेर सुन्दर बजार आएको थियो ।
उसको काकाले अर्को मजदुरलाई पर्खाल पानीले भिजाउन लगाउँदै थियो । ऊ भने बालुवा र सिमेन्ट मिसाउँदै थियो । त्यही बेला बिसनाथ बाबुको कान्छो भाइ शिवनाथ उसलाई खोज्दै त्यहाँ आयो । काम सकेर साँझ आउँछु भन्दा पनि मानेन उसले । बिसनाथ बाबुले उनीहरु जस्तो मानिसलाई विरलै बोलाउने गर्थ्यो । उसको मुटुको गति त्यसबेलादेखि नै बढ्न थालेको थियो ।
"जा न त ! मालिकले केही काम परेर नै त बोलाउनुभएको होला नि !" काकाले समेत यसो भनेपछि ऊ गएको थियो । ऊ पुग्दा त्यहाँ अलि भीडभाड नै थियो । नजिकै एउटा प्रहरीको गाडी थियो । उसलाई सीधै बैठक कक्षमा लगियो । ऊ पुग्नेबित्तिकै बिसनाथ बाबुले सई प्रेमबहादुर थापाबाहेक अरू सबैलाई त्यहाँबाट जान भन्यो ।
"कि रे सुर्जा, अचेल तँ पगल्नीसँग बहुत छेडखानी गर्छस् रे ?" सबै त्यहाँबाट निस्केपछि बिसनाथ बाबुले ऊसँग जिस्कँदै सोध्यो । अघिसम्म ऊ अन्योलमा थियो । बिसनाथ बाबु त्यसरी जिस्केको देखेर अचम्ममा पऱ्यो ।
"कहाँ मालिक, हामीसँग फुर्सत कहाँ छ र जिस्किनु ? … यसो अगाडि परेको बेला एक दुई बात भनेर लाटीलाई चिढाउनु अलग कुरा हो ।"
"अनि तेरो एक-दुई बातले नै लाटीले पेट बोकी त ?"
अब भने ऊ नराम्ररी झस्क्यो । कस्तो मजाक हो यो ? उसले चारैतिर अँध्यारो देख्न थाल्यो । बिसनाथ बाबु अझै हाँसिरहेको थियो । उसको नीलो आँखामा षड्यन्त्रको ठूलै खाडल देख्यो सुर्जाले, जहाँ ऊ भाँसिदै थियो । उसको ओठमुख सुकिसकेको थियो । उसले दुवै हात जोडेर भक्भकाउँदै बिन्ती गर्न थाल्यो ।
"के भन्दै हुनुहुन्छ मालिक ? लाटीको पेट ? मैले सपनामा समेत लाटीलाई त्यो नियतले देखेको छैन ।"
"ढाँटेर कति जनालाई बेबकुफ बनाउँछस् हँ तैंले ?"
सुर्जाको बिन्तीले उसलाई कुनै प्रभाव पारेन ।
"उहाँ सई साहब आफैंले गस्तीबाट फर्किंदा तँलाई लाटीकोमा जाँदै गरेको देख्नु भएकै हो, कि कसो सई साहब ?"
बिसनाथ बाबुले एक्कासि बोलाएपछि सई प्रेमबहादुर थापा झस्कियो । अनि कपाल कन्याउँदै भन्यो, "हो, बिल्कुल हो ।"
"अरे, उहाँ मात्रै किन ? रामप्रसाद सर चिन्छौ ? उहाँले पनि यहाँबाट टिउसन पढाएर फर्किदाँ तँलाई लाटीकोमा देख्नुभएको रहेछ । अग्रवालजीको छोरा…, पण्डित चन्द्रकान्त झा… ।"
अब भने उसलाई फँसाइँदैछ भन्ने बुझ्न गाह्रो भएन । अगाडि बिसनाथ बाबु धाराप्रवाह बोलिरहेको थियो । उसलाई भने आफू कुनै विराट अन्धकारमा भासिइरहेको अनुभव भइरहेको थियो ।
"अब तँ आफैं भन्, यतिका मानिसहरुले देखेको पनि झुटो भयो ?" बिसनाथ बाबुले उसलाई गहिरिएर हेर्दै सोध्यो । तर, उसको भने बक नै फुटेन ।
"अरे चिन्ता किन गर्छस् ? जवानीमा गल्ती त जसको पनि हुन्छ । आखिर लाटी नराम्री पनि त छैन । त्यतिको राम्री केटी त तैँले आफ्नो चमारमा डिबिया बालेर खोज्दा पनि पाँउदैनस् । मेरो कुरा मान् । पञ्चायतीमा लाटीको पेट कबोल गर । त्यहाँबाट केही पैसा पनि उठाइदिँउला । अनि कहीँ टाढा गएर घरजम गरेर बस् ।"
"ना, मालिक ना । म अर्काको पेटको जिम्मा लिँदिन ।"
उसले बिस्तारै तर ठाडो स्वरमा भन्यो । अनि सीधै बिसनाथ बाबुको अनुहारमा हेऱ्यो । उसको मुस्कान गायब भएको थियो । उसका नीला आँखा झन् बल्न थाले । रिसले उसको ओठ फर्फराउन थाल्यो । तर, उसले आफूलाई सम्हाल्यो र सुर्जाको काँधमा हात राख्दै भन्यो, "मैले तेरै लागि हो भनेको । थानामा तेरोविरुद्ध उजुरी परेको थियो । सई साहबले त सीधै समातेर लान्छु भनेको थियो । मैले हो रोकेको । अब मेरै कुरा मान्दैनस् भने त म के गरुँ ? लानुस् सई साहब ।"
यति भन्दा सईले उसको कठालो समातिसकेको थियो । ऊ हल्लिन मात्र के खोजेको थियो, सईले उसको ढाडै भाँचिने गरी एक लात्ती दियो । ऊ पीडाले चिच्यायो । उसको चिच्याइसँगै अरू प्रहरीसमेत भित्र पसे । उसलाई कुट्दै भ्यानमा हाले । उसको चिच्याइसँगै कुटाइ पनि तीव्र हुन थाल्यो । उसको होस रहुञ्जेलसम्म कुटाइ खाएको थाहा थियो उसलाई । उसका आँखाअगाडि बिस्तारै अँध्यारो छाएको थियो । दिमाग फनफनी घुमेको थियो । रिङ्गटाले बान्ता आउलाजस्तो भएको थियो । त्यतिबेलासम्म पनि उसको शरीरमा लात र मुक्का बज्रेकै थियो ।
होशमा आएपछि उसले आफूलाई त्यस टायरमा झुन्डिएको पायो । उसको पेट नराम्ररी दुखेको थियो । एकपटक त रगतको बान्ता पनि गऱ्यो । त्यसपछि ऊ नराम्ररी झस्क्यो । अनि चिच्याउन थाल्यो । त्यसको निकै बेरपछि सई र हवल्दार दुवै आए । सईको हातमा एउटा सेतो कागज पनि थियो ।
"भनेपछि लाटीको पेट तेरै हो । होइन त ?"
हवल्दारले उसको पेटमा लठ्ठीले घोच्दै सोध्यो । ऊ पीडाले फेरि चिच्यायो ।
"ए छोड्दे !" सईले उसलाई रोक्यो ।
"चाँडो यो कागजको बेहोरा सुनाएर औंठाछाप लगाइहाल् ।"
"हजुर जहाँ भन्नुहुन्छ, म त्यहीँ औंठाछाप लगाउँछु । पहिले मलाई यहाँबाट झार्नुस् ।"
सुर्जाले रुँदै भन्यो । सईले आदेश दिएपछि उसलाई झारियो । उसका हात र खुट्टाहरु खोलिए । ऊ उभिन खोज्यो तर खुट्टा थर्रर कामे । ऊ भुइँमा ढल्यो । प्रहरीहरुले उसलाई त्यहाँ भएको ओछ्यानमा राखे । सईले दिएको कागजमा औंठाछाप लगाए र उसलाई त्यत्तिकै छाडेर हिडे ।
त्यसको केही दिनपछि स्कुलको चौरमा पञ्चायती बस्यो । विषय अलि अनौठो भएकोले वरपरका गाउँबाट समेत मानिसहरु आएका थिए । यति धेरै मानिसका बीचमा लाटी भयभित देखिन्थी । अझ उसलाई समातेर ल्याइएको हुनाले बेलाबेला ऊ चिच्याउँथी पनि । सुर्जालाई भने एउटा कुनामा बाँधेर राखिएको थियो । त्यहाँ अरू बेलाको पञ्चायती जस्तो वादी र प्रतिवादी कोही थिएन । बिसनाथ बाबुले सुर्जाले औंठाछाप लगाएको कागजको बेहोरा पढेर सुनायो । अनि सबैलाई सुनिने गरी कबोल्न पनि लगायो ।
त्यसपछि लाटी र सुर्जालाई के गर्ने विषयमा छलफल हुन थाल्यो । प्रस्ताव बिसनाथ बाबुले नै ल्यायो । उसैले लाटी र सुर्जाको विवाह गरिदिने र सुन्दर बजारबाट टाढा छाडेर आउने प्रस्ताव ल्यायो । विवाहका लागि चाहिने खर्चका लागि त्यहाँका प्रत्येक घरबाट चन्दा उठाउने प्रस्ताव पनि ल्यायो । त्यसमा सबै सहमत भए ।
सुन्दर बजारमै सबैभन्दा बढी चन्दा सीताराम अग्रवालले दियो । लाटी र सुर्जाको विवाह त्यहाँको राम मन्दिरमा धुमधामसँग भयो । तिनीहरुको विवाह पण्डित चन्द्रकान्त झाले गरायो । तिनीहरुलाई सुन्दर बजारबाट टाढा छोड्ने जिम्मा सई प्रेमबहादुर थापाले लियो । उसले तिनीहरुलाई बोर्डर कटाएर फर्क्यो ।
सुन्दर बजार फेरि शान्त भयो । केही दिनसम्म त्यहाँका मानिसहरुले लाटी र सुर्जाको कुरा गरे तर चाँडै सबैले बिर्सिए । कतिसम्म भने उसको काकाले समेत ऊ कहाँ गयो, के गऱ्यो, केही सोधखोज गरेन । बजारबासीले दुवैलाई यसरी बिर्से, मानौं तिनीहरु त्यहाँ कहिल्यै थिएनन् ।
लगत्तै २०५६ सालको आमनिर्वाचन भयो । सई प्रेमबहादुर थापाले बिसनाथ बाबुलाई युद्धस्तरमा सघायो । उसले सजिलै चुनाव जित्यो । पार्टी बहुमतमा थियो । ऊ राज्यमन्त्री पनि भयो ।
सई प्रेमबहादुर थापाले बिसनाथ बाबुको मद्दतले आफ्नै जिल्लामा सरुवा मिलायो । सर रामप्रसाद शर्मा चाँडै नै हेडसर भयो । सीताराम अग्रवालले सबैभन्दा पहिले छोराको विवाह गरिदियो र आफूसँगै व्यापारमा लगाउन थाल्यो । चन्द्रकान्त झाले भने जजमानी गर्नै छोड्यो ।
त्यसपछि पनि देशमा ठूलाठूला परिवर्तनहरु भए । २०५८ सालमा राजदरबार हत्याकाण्ड भयो । त्यही साल माओवादीसँगको वार्ता असफल भएपछि देशमा सङ्कटकाल लागू भयो । ०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ जस्ता दरबारिया ‘कु’का घटनाहरु पनि घटे । २०६२/६३ को आन्दोलनले राजसंस्थाको अन्त्य गऱ्यो । तर, ती कुनै पनि घटनाले सुन्दर बजारलाई असर गरेनन् ।
जब मधेस आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो र तराईका राजमार्ग ठप्प भए, सबैलाई अचम्ममा पार्दै लाटी सुन्दर बजारमा देखा परी । तर, ऊसँग सुर्जा भने थिएन । एउटा ७-८ वर्षको केटो थियो । त्यहाँका प्राय: सबै मानिस लाटी र उसको छोरा हेर्न पुगे । छोराको अनुहारमा सुर्जाको कुनै नामोनिशानै थिएन । जब मानिसहरु उसको आँखा नियाल्थे, सबै झसङ्ग हुन्थे । शायद भयले होला, कसैको मुखबाट एक शब्द पनि निस्केन । किनकि त्यस्ता आँखा सुन्दर बजारमा बिसनाथ बाबुबाहेक अरू कसैका थिएनन् ।
संविधानसभाको चुनावमा बिसनाथ बाबुले फेरि त्यही क्षेत्र रोज्यो । चुनाव प्रचारको क्रममा भोट माग्दै जाँदा लाटीको छोरो खुर्रर दौडेर आयो र उसको गोडा समातेर ‘बुवा… बुवा…’ भनेर कराउन थाल्यो । दुवैका आँखा जुधे । बिसनाथ बाबु नराम्ररी झस्क्यो । छेवैमा उभिएको उसको एउटा कार्यकर्ताले त्यो केटोलाई समात्यो र जोडले दुई लात्ती दियो ।
"भाग माधर… पागल !"
त्यो केटो त्यहाँबाट भाग्यो । उसले यो स्थितिको कल्पनासमेत गरेको थिएन ।
"यो त्यही लाटीको छोरा हो हजुर । कोही नयाँ मानिस देख्नै हुँदैन, बुबा भनेर कराउन थालिहाल्छ ।"
त्यो कुराले उसलाई केही सान्त्वना दिए पनि चयन भने दिन सकेन । एक्लो पर्नासाथ '…बुबा… बुबा…’ भनेर कराउँदै गरेको त्यो केटोको झल्को आइहाल्थ्यो । उसका आँखा हेर्दा त्यो उसकै छोरो हो भन्नेमा कुनै शङ्का थिएन । त्यतिबेलासम्म त पूरै सुन्दर बजारले नै थाहा पाइसक्नु पर्ने हो । तर, किन कसैले केही भनेन ? शायद डरले होला । उसले त्यस्तै ठान्यो ।
उसले तत्कालै केही गर्न नखोजेको पनि होइन तर चुनावलाई असर गर्न सक्छ भनेर केही गरेन । त्यसपछि ऊ सुन्दर बजारबाहिर भोट माग्न निस्के पनि भित्र कहिल्यै निस्केन । उसलाई त्यसको खासै आवश्यकता पनि थिएन ।
चुनाव शान्तिपूर्ण तरिकाले नै सम्पन्न भयो । भोलिपल्ट यता बिसनाथ बाबुले चुनाव जितेको घोषणा भयो, उता लाटीको छोरो गायब भयो । जुन मानिसहरु उसको जितको ऱ्यालीमा सहभागी थिए, तिनै मानिसहरु छोराका लागि चिच्याउँदै गरेकी लाटीको रमितामा पनि सहभागी भए ।
बिसनाथ बाबु चुनाव जितेर गएपछि फेरि कहिल्यै फर्केन । त्यहाँका मानिसहरुलाई थाहा थियो, लाटीको छोरोलाई बिसनाथ बाबुले नै हो गायब गराएको । तर, सबै मौन थिए । त्यसैले सुन्दर बजार शान्त पनि थियो । एकजना लाटी मात्र थिई, जो बेलाबेलामा आफ्नो छोराका लागि चिच्याइरहन्थी ।
(स्रोत : फिनिक्स बुक्सबाट प्रकाशित कथाकारको कथासंग्रह ‘अब्बा’बाट सभार)